Kambani yedu inoshandisa kuvandudza-inotungamirwa nekuvandudza, inoramba ichivandudza hurongwa hwekutonga uye mashandiro esainzi uye tekinoroji innovation, inosimbisa zvine simba hunyanzvi hwesainzi uye tekinoroji, inomhanyisa hunyanzvi hwekugadzira maindasitiri, uye inoshandisa yakakwirira-tech kusimudzira kukwikwidza kwemabhizinesi.
Kambani yedu ine vanhu makumi matatu veR&D timu, vanosanganisira 9 vanachiremba veR&D matekiniki uye makumi maviri nevaviri veR&D vashandi. Isu zvakare tinogadzira matekinoroji uye zvigadzirwa nevagadziri vehukama, kutora chikamu muhunyanzvi uye dhizaini yechigadzirwa, uye nekuvandudza zvinoenderana nezvinodiwa nemusika. Zvigadzirwa zvinogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, zvinosanganisira asi zvisingaganhurirwe kune zvigadzirwa, zvakatemwa, tekinoroji, pac kaging, nezvimwe.
Kambani yedu inoronga kuwedzera matarenda matsva kuchikwata cheR&D mumakore mashanu anotevera. Takagadzirira kuwedzera vanhu varipo makumi matatu kusvika makumi matanhatu; yakagadzirira kuona kutsvagisa uye kusimudzira tekinoroji yemidziyo yekurapa, uye pakupedzisira inovandudza kugadzirwa kwezvigadzirwa.